မောင် (MG) နဲ့ အတူ တစ်နှစ်တာ – Myanmar Gazette Calendar 2016 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မောင် (MG) နဲ့ အတူ တစ်နှစ်တာ – Myanmar Gazette Calendar 2016	28
မောင် (MG) နဲ့ အတူ တစ်နှစ်တာ – Myanmar Gazette Calendar 2016
Posted by ဇီဇီ on Nov 26, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 28 comments
တစ်ပတ်မှာ စနေ ဆိုရင်~~~
တွေ့ကြတာ နေ့တစ်ဝက်စာ မေ့မရပါ~~~~
တနင်္ဂနွေ ဆိုရင် မောင်ရယ် ဘုရားစေ့အောင် ဖူးကြမယ် ~~~
တောင်းစုချွေ ဘဝတိုင်း စုံရအောင်~~~~~
တနင်္လာ၊ အင်္ဂါမှာဆို အတွဲလေးနဲ့ မြို့နှံ့အောင် သွားပြီး ရင် ဘိုင်စကုတ် ဝင်ကြည့်မယ်~~~
ဗုဒ္ဓဟူးမှာ တစ်ခါ ~~
အင်းယားမှာ အတွေ့ဆုံး ဒီသောကြာ~~~
စာသားတွေ မှန်မမှန်တော့ မသိ။ ပြက္ခဒိန်တွေ ရပြီမို့ ခင်ဇော် တစ်ကောင် ပျော်နေတယ်လေ။
သီချင်း တစ်အေးအေး လုပ်လို့မှ မဆုံးခင် ချစ်သော ဆက်ဆက် တစ်ယောက် အပူစ ပေးပါပြီ။
ပြက္ခဒိန် ဆို တာ ပုပ်သိုးကုန် နော်။
ရောင်းကုန်မှာဖြစ်မယ်။ အချိန်မရှိဘူးး မြန်မြန်ရောင်းပေးပါ။
ငင့်။ ဒီ အပူမီး ခုထိ မငြိမ်းနိုင်တာနဲ့ ရွာထဲကို ပြက္ခဒိန် လှည့်လည် အရောင်းထွက်ပါတယ် ခင်ညာ။
၂၀၁၆ မြန်မာ့ဂဇက် ပြက္ခဒိန်
အမျိုးအစား – စားပွဲတင် ပြက္ခဒိန်
ရွက်ရေ – ၇ရွက် ကျောကပ် (၁၂လ ၆ရွက်+ မျက်နှာဖုံး)
တစ်ခု ၂၅၀၀ ကျပ်ပါ။
ရွာ အမှတ်တရ ထုတ် ပြက္ခဒိန်များ လိုချင်ဆိုရင်
မ Novy – Phone No. ၀၉-၂၅၄၃၈၆၂၇၉ and Phone no. ၀၉- ၇၉၇၈၉၁၁၆၂ မှာ ဆက်သွယ် ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်..
Htoo Aung Thin Travels & Tours 68. မိုးမခလမ်း စမ်း​ချောင်း ၀၉- ၂၅၄၃၈၆၂၇၉ မှာ ရုံးချိန်​အတွင်း ဝယ်​လို့ရတယ်​
အန်တီမမ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
ဦးကျောက် – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
KZ – ၅၀. (၃ လ စာ နဲ့ ကာဗာ)
မသဲ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
မနိုဗီ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
သူကြီး – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
အန်တီဒုံ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
Mလုလင် – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)
ဦးမိုက် – ၂၀ ခု (၂ လ စာ)
၁) အကြံညာဏ် အစဖော်သူ – အလင်းဆက်
၂) ဒီဇိုင်းနာ – မိုးသူ
ဓာတ်ပုံ ဆရာ တွေ ဖြစ်တဲ့
၁) ကိုပေါက် (မန္တလေး)
၂) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်
၃) ကိုမျိုး (ဖောဂိုင်း)
၆) ပု(ချ) တို့ကိုလည်း မေတ္တာ လက်ဆောင် အဖြစ် ပြက္ခဒိန် တစ်ခုစီ ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပံ့ပိုးကူညီခဲ့မှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီ နေရာကနေပြောလိုပါတယ်။
တဂျီး – ၅ ခု (ခြောက်သောင်း ပဲ တွက်တယ်။ စပွန်စာ အတွက် လေးသောင်း ခွဲထည့်လိုက်လို့)
ကျောက်(စ) – ၅ ခု (ခြောက်သောင်း ပဲ တွက်တယ်။ စပွန်စာ အတွက် လေးသောင်း ခွဲထည့်လိုက်လို့)
ကေဇီ – ၅ ခု (ခုနှစ်သောင်း)
တောတွင်းပျော် – ၅ ခု (ငါးသောင်း)
အန်တီဒုံ – ၁ ခု (တစ်သောင်း)
စွယ်တော်ရွက် – ၂ ခု (နှစ်သောင်း)
စောရိုး – ၅ ခု (ငါးသောင်း)
မွအိ – ၃ ခု (သုံးသောင်း)
ကိုထူးဆန်း – No reservation (၅ သောင်း)
ဘဖော – No reservation (ငါးသောင်း)
ဒါက ကျနော် သိသလောက် အမှာစာရင်းးး
ဦးဦးပါလေရာ – ၁၀ (၂၅၀၀၀ ပေးးပြီးး)
ကောင်းကင်ပြာ – ၁၀
မွန်ကစ် – ၂
ကိုစွယ်တော် – ၁၀
ကိုလှမိုး – ၅
မွန်မွန် – ၅
ကိုဂျက် – ၅
မယ်ပု – ၅
အိတုန်း – ၅
ကိုမှော် – ၁၀
ကြည်ပြာ – ၂
အန်ကယ်ဂျီး – ၁၀
ချာတူး – ၁
ငြိမ်း – ၃
ကိုနီ – ၁
ကိုနို – ၁
ကမျိုး – ၆
ဝေ – ၅
Maung Thura – ၁
ရွာသူဂျူး – ၂ ခု
စုစုပေါင်း – ၁၁၀####
ပိုက်ဆံ ကို အကုန်ရှင်းပြီးမှ ပို့(စ) တင်ပြီး စာရင်းရှင်းပါ့မယ် ခင်ညာ။
Alinsett @ Maung Thura says: မှာထားတဲ့ စာရင်းအရရယ်—
လက်ဆောင်ပေးရမယ့် ဓါတ်ပုံဆရာတို့ဘာတို့ စာရင်းအရရယ်—
-ကြော်ငြာရှင်တွေနဲ့ အလှူရှင်တွေအတွက် လက်ဆောင် စာရင်းရယ်
အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ 296 ဖြစ်နေပါရောလားဗျ
ဆိုတော့ အခုရေ သုံးရာမှာ လေးခုကြီးများတောင် ကျန်နေသေးတယ်—မကုန်ပဲ (စာအုပ်တုန်းကလို) သောင်တင်နေမှာ စိုးရိမ်တယ်၊ လေးခုကြီးများးးးးဒေါင်
အန်တီဒုံရဲ့ ဆေးဆိုင်မှာ မှာထားပြီး အခုထိ လာမယူတဲ့ ဂဇက်တံဆိပ်ရိုက် အင်းကျီတွေ ကျန်သေးသဗျ—
အင်းကျီကို ဆိုဒ်နဲ့ မှာသူ အမည် အသေအချာ ခွဲပေးပြီး တံဆိပ်ကပ်ထားပါကြောင်းးး
မှာပြီး လာမယူသေးသူများကို စောင့်နေပါကြောင်းးးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့် မလောက်မှာလဲ ကြောက်
ထပ်ရိုက်လို့ မကုန်မှာလဲ ကြောက်နဲ့။
ထပ်မရိုက်တော့ဘူးလားလို့ ပဲ ဆက်ဆက်ရေ။
Shwe Ei says: ဂဇက်​ တီရှပ်​ ရှိ​သေးရင်​ တစ်​ထည်​​လောက်​ယူမယ်​
Medium size :-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: ဖွေးဖွေးကို လက်ဆောင် ၄ခုပေးဖို့နိ ဝယ်လိုက်လေ…
kai says: အမ်…
ဒီလအယ်ဒီတာ့ထံပေးစာထဲ.. ထည့်ကြွားထားပြီး… ကျုပ်ကဘယ်နှခုရမှာလည်းဟင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၁၅ ခုလေ။
ကထူးဆန်း says: ၀ယ်ချင်လျက် မရလိုက်သူ ရှိရင် အနော့ ငါးခု လည်း ရောင်းလိုက်ပြီး gazette fund အနေနဲ့ သုံးပါ ခင်ဗျ ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးဇူးပါ ကိုကိုထူးဆန်း ခည။
Ma Ma says: ကျန်တဲ့၎ခု ကျန်ဖြတ်ဖြတ်ပေးမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချစ်မရေ။
kai says: မာကက်တင်းကတော့ မခေဘူး..
အကုန်လန့်ဖြန့်ကုန်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆိုင်တွေမှာဆို ……
“မနက် ၇ နာရီလောက် ဆို ကုန်ပြီတဲ့” ဆိုပြီး နာမည်ထွက်တဲ့ ဆိုင်တွေက ပိုရောင်းရတယ် သပ်လားးး
Mr. MarGa says: ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ
ကိုယ်တိုင် ပြက္ခဒိန် ဝယ်ဖို့အတွက်
ပြက္ခဒိန်တင်စရာ စားပွဲနဲ့ ထိုင်ခုံနဲ့ စမတ်ကျကျ အလုပ်တစ်ခုကို အသည်းအသန် ရှာပါသော်လည်း
ကံမကောင်း အကြောင်းမလှဘဲ ကြုံရာ ဝင်ထိုင်ပြီး လုပ်နေရတဲ့ အိုင်တီသမားပဲ ပြန်ဖြစ်လာတာမို့
ဘေးကပဲ ထိုင်ငေးနေတယ် လို့
ဇီဇီခင်ဇော် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂျက်စပဲရိုး says: ငါးခု နော် ငါးခု… ချန်ထားပေးဂျဘာာာ
တကယ်ကြီး လာယူပါ့မယ်း)
ဇီဇီခင်ဇော် says: မနို ကိုပြော။
နာ က နာ့ အတွက်တောင် ယူထားတာမဟုတ်ဘူးးးး
Mike says: .အောင်မြင်စွာပေါ်ထွက်လာသော“၂၀၁၆ မြန်မာ့ဂဇက် ပြက္ခဒိန်” အားဝမ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ် .JUMBO ကြော်ငြာလေးအဆင်ပြေပြေထည့်ပေးတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်နာ အောင်မိုးသူရော .စီစဉ်ကြသူအားလုံးရော…ငွေကြေးပံ့ပိုးကြသူရွာသူားများရောကျေးဇူးတင်ပါဂျောင်း
.ပြက္ခဒိန်ကို မနိုအိမ်မှာ မနက်ဖန်စနေနေ့သွားယူပါမည့်အကြောင်း…ဟောင်း..ဟောင်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: အခု ၂၀ က ကြော်ငြာရှင် အနေနဲ့ ရမှာ ဖြစ်ပြီး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုထွန်းဝင်းလတ်က တစ်ခုလိုချင်တယ် ပြောပါတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: မနို ကို ဖုန်းဆက်လို့ ရပါတယ် ဗျ။
မ Novy – Phone No. ၀၉-၂၅၄၃၈၆၂၇၉
Phone no. ၀၉- ၇၉၇၈၉၁၁၆၂ မှာ ဆက်သွယ် ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်..
ဦးကြောင်ကြီး says: စောင်လျေတထောင် အမြန်လိုခြင်လို့ အဲသာ… ခုချက်ခြင်း လျမယ်ဆို လျူ မယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အင်္ဂါမစုံတဲ့ ကြောင်ကို
Novy says: မြန်မြန်လာဝယ်ကြနော်
မောင် (MG)Myanmar Gazette Calendar 2016 အတွက်ဆိုတော့ မောရမှန်းတောင်မသိဘူး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒါလင့် ကိုပစ်ပြီး မောင့် ဘက် ရောက်သွားဘီ
Ko Two says: အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရပါတယ် ခညာ
တစ်လချင်းပေးပါ။ ပြက္ခဒိန် ကိုလည်း တစ်ရွက်ချင်း ပေးပါ့မယ်.
အောင် မိုးသူ says: တစ်ခုလက်ဆောင်ရတော့ တစ်ခုက ၀ယ်ရမှာပေါ့ ဟိဟိ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: သောကြာနေ့လောက် မနိုဆီ သွားယြူုဖစ်မယ်.. ချန်ထားပေးပါအူးလို့စ်စ်..